Raw Alpha GPC powder (28319-77-9) Vaiti - Phcoker Chemical
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9) video
L-Alpha glycerylphosphorylcholine (alpha-GPC, choline alfoscerate) ishoko rezvinyorwa zvinowanikwa muuropi. Ichowo chirwere cheparasympathomimetic acetylcholine chinogona kunge chine mikana yekurapa chirwere cheAlzheimer uye mamwe dhementia.
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) pfupfu inokurumidza kusunungura choline kune uropi muhutano hwepfungwa-neuropi uye inonzi biosynthetic precurse ye acetylcholine. Iyo isiri mishonga yemishonga munyika dzakawanda.
MuEurope alpha-GPC mishonga yemishonga yekurapa kwechirwere cheAlzheimer s. MuUnited States alpha-GPC inowanikwa chete sekuwedzera kwezvokudya, kunyanya muzvigadzirwa zvinokurudzirwa kuti zvivandudze chiyeuchidzo. Zvimwe zvinoshandiswa kuAlpha-GPC zvinosanganisira kurapa marudzi akasiyana-siyana ekudengenyeka kwevanhu, chirwere, uye "mini kurohwa" (kurwisa ischemic nguva duku, TIA ).
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9) Specifications
Product Name Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) powder
Kemikari Name Choline Alfoscerate; Alpha GPC; L-Alpha glycerylphosphorylcholine; Choline glycerophosphate
Kirasi yeMishonga parasympathomimetic acetylcholine
Molecular Wsere 257.223 g / mol
Kunyorera Point 142.5 ° C
Kusununguka nguva Hapana zuva rawanikwa
Biological Half-Life Iyo Alpha GPC hafu yehupenyu yakapoteredza maawa 4-6 asi inonzi inopera mukati ma1-2 maawa ekudyiwa
ruvara Solid powder
Storage Temperature 0 - 4 ° C kwenguva pfupi (mazuva kusvika mavhiki), kana -20 ° C kwenguva refu (mwedzi).
APane Choline Alfoscerate inoshandiswa mukurapa kweAlzheimer's disease uye imwe demoaa.
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9) Tsanangudzo
Alpha GPC ndiro zita rinowanzoitwa L-Alpha glycerylphosphorylcholine, cholinergic nootropic inowanzoitika asi inogonawo kutorwa sechimwe chinhu. Alpha GPC powder inozivikanwa nekukurumidza uye nekuvimbika kununura choline kuuropi pakusikwa kwekucherechedza-kukurudzira neurotransmitter acetylcholine.
Inobatsira zvakasimba zveuropi uye muviri uye inogona kuwedzera huwandu hwakazara hwekuziva, kugadzirisa utano hwemagetsi, nekubatsira kuchengetedza zvinokosha zveuropichemical muuropi.
Alpha-GPC inokurumidza kusunungura choline kune uropi muropa reuropi-reropi uye inonzi biosynthetic precurse ye acetylcholine. Iyo isiri mishonga yemishonga munyika dzakawanda. I-FDA yakatsunga kuti kudya hakuna kupfuura 196.2 mg / munhu / zuva inonzi GRAS. Mune dzimwe nyika dzeEurope, inotungamirirwa semishonga yemishonga uye inoshandiswa mukurapa chirwere cheAlzheimer's.
Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9) Mechanism of Action?
Alpha-GPC inotsigira sangano rose remagetsi nekuwedzera acetylcholine uye cholinergic basa. Inogonawo kukwidza mazinga evamwe nhume dzakadzivirira-uropi dzakadai se:
Kunyanya, sezvakataurwa, zvinogona kukura mazinga ehomoni ekuwedzera.
Benefits yeRaw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9)
Kuvandudza Memory uye Kuvandudza Cognition
Inovandudza Stroke Recovery
Kunowedzera Kutamba Kwemitambo, Kuwedzerwa Simba uye Kukurumidza Post-Workout Recovery
May Kuvandudza Maziso
Ngadzivirire Kurwisa Mazai
Yakarudzwa Raw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9) Dosage
Alpha GPC inenge ye40% choline nekurema. Saka 1,000 mg yeAfa GPC powder inopa anenge 400 mg ye choline.
Alpha GPC inorayirwa kuyerwa kwepfungwa dzekuziva ndeye 250-1,200 mg pazuva. Heino kuputsika kwemiromo ye dosing:
Chirwere cheAlzheimer uye dementia: 400 mg, 3X zuva rimwe nerimwe kwe6 - 12 mwedzi.
Stroke kupora: 1,000 mg zuva rega rega 1 mwedzi (sejojo).
400 mg muromo, 3X zuva rega rega kwemwedzi 5 pashure
Mutambo unobatsira: 250 mg zuva rimwe nerimwe kwe1 vhiki 
600 mg zuva nezuva nokuda kwe1 - 6 mazuva.
Meso: 400 mg, 2X zuva rimwe nerimwe kwemwedzi 2.
Maererano nehupupuriro hweanecdotal, chirwere che nootropic zvinokonzera kubva 400 kusvika ku1,200 mg / zuva. Iwe unogona kutanga kutanga pamucheto wezasi uye kutora mhinduro yako.
Zvikanganiso yeRaw Alpha GPC (Choline Alfoscerate) powder (28319-77-9)
Alpha-GPC powder yakanga yakachengeteka mumakiriniki ose. Muchikamu chiduku chevarwere, zvakakonzera migumisiro yakaoma yakadai sokuti:
Mukuchengeteka kwekudzidzira imbwa nemakonzo, megadoses (kusvika kuna 3,000 mg / kg) yakangoita zvishoma nezvishoma basa remhuka. Vatsvakurudzi vakapedzisa kuti kwenguva refu (masikati 26) alpha-GCP kushandiswa kwe150 mg / kg (pamusoro pe 10 g zuva rega rega varume vakuru) havatauri njodzi dzehutano.
Pamusana pekushaikwa kwekuchengeteka kwedhara, vana nevakadzi vane pamuviri vangada kudzivisa alpha-GPC.